रोलेक्स घडी कस्तो बिशेषताले संसारमै चर्चित बन्यो ? - Naya Aawaj
महिलाको सौन्दर्य सुन, चाँदी, हिरा र मोतीका गरगहनामा खुल्छ भने जस्तै पुरुषको ब्यक्तित्व घडिमा भल्किन्छ भनिन्छ । त्यसैले संसारका बिभिन्न क्षेत्रका चर्चित पुरुषहरु कुन ब्राण्ड वा मोडलको घडी बाँध्छन् भन्ने कुरा चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ । अझ घडीका कुनै–कुनै ब्राण्ड त बिलासिता, रवाफ र प्रतिष्ठाकै बिषय समेत बन्ने गरेको छ ।
बिश्व बिख्यात म्यागजिन फोर्ब्सको संसारका सबैभन्दा महत्वपूर्ण ब्राण्डहरुको सूचीको ६४ औं नम्बरमा परेको रोलेक्स घडी एउटा त्यस्तै ब्राण्ड हो । रोलेक्स एसए नाम गरेको बिलासी स्विस घडी निर्माता कम्पनीले बनाउने रोलेक्स घडी सन् १९०५ देखी लन्डनमा बनाउन शुरु गरिएको थियो । तर, सन् १९१९ देखि यो घडीको उत्पादन स्वीट्जरल्याण्डबाट गर्न थालिएको थियो ।
हान्स विल्सडोर्फ फाउन्डेसनको स्वामित्वमा रहेको यस कम्पनीले कर्पोरेट कर तिर्दैन किनकि यो घडी निर्माता कम्पनीको मालिक नाफामुलक कम्पनी होइन । यो फाउन्डेसन हो जसले कर तिर्नुपर्देन । यो फाउन्डेसन स्थापनाको पनि रोचक प्रसंग छ । हान्स विल्सडोर्फको श्रीमतीको सन् १९४४ मा निधन भयो । हान्सले सोभन्दा अगाडि नै रोलेक्स एसए कम्पनी स्थापना गरिसकेका थिए । तर श्रीमतीको निधनपछि उनले आफ्नो नाममा फाउन्डेसन खोली सो कम्पनीलाई फाउन्डेसन मातहत ल्याएका थिए । रोलेक्स एसए कम्पनीले कमाएको नाफाको ५० प्रतिशत रकम फाउन्डेसनले परोपकारी कार्यमा खर्च गर्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत नाफा रकम सोही कम्पनीमा थप लगानी गरिन्छ । यो फाउन्डेसनले परोपकारी काम के कस्ता गर्छ र कहाँकहाँ गर्छ भन्ने गोप्य रहन्छ ।
२ हजार जना कामदार कार्यरत रहेको यो कम्पनीले अहिले पनि हातैले रोलेक्स घडी बनाउने गर्छ अर्थात रोलेक्स घडी बनाउन विषेश गरेर मेसिनको प्रयोग हुदैन । धनाढ्य पुरुषहरुको हातको शोभा बन्नु अघि यो घडीलाई हावा र पानी प्रुफ छ कि छैन भनेर जाँच्न ३०० मिटर पानीको गहिराई र तिब्र हावाको प्रवाहमा राखिन्छ । यस्तै क्रोमियम र निकेलको मात्रा बढि भएको अत्यन्तै महङ्गो र गुणस्तरीय धातुको प्रयोग गरिन्छ ।
रोलेक्स घडी संसारको सर्बाेच्च चुचुरो सगरमाथा र महासागरको सबैभन्दा गहिराइमा लैजादा एक सेकेण्ड पनि ढिलो चाँडो हुदैन । सर एडमण्ड हिलारीले सन् १९५३ मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दा यो घडी बाँधेका थिए । यस्तै सन् १९६० मा अमेरिकी जलसेना नेभीले महासागरको ३६ हजार ७ सय ९८ फिट गहिराइमा जाँदा पनि यो घडी लगिएको थियो ।
रोलेक्सको अर्को रोचक तथ्य के हो भने यसका कारण एकपटक हत्यारा समेत पत्ता लागेको थियो । अल्बर्ट वाकर नाम गरेका एक ब्यक्तिले आफ्नो पार्टनरलाई मारे । साथी मारेर पानीको ढलमा फालेको २ हप्तापछि मृतकको शरिरमा चिन्न सकिने एउटै बस्तु थियो, त्यही रोलेक्स घडी । जसको कारण हत्यारा पत्ता लागेको थियो ।
सेवा बन्द हुँदा फेसबुकलाई हरेक मिनेट आश्चार्यजनक क्षति
पारसले चलाउने बाइकको कति पर्ला नेपालमा मूल्य ?
ललितपुरमा बन्ने भयो पाँचतारे लक्जरी होटलसहितको अपार्टमेन्ट, एउटै फ्ल्याटको मूल्य ३० करोडसम्म !
अब फेसबुकमा नयाँ दुनिया पाईने, एकै ठाउँमा प्रत्यक्ष रुपमा बोलेको जस्तै आभास हुने